Somaliland: Muxuu salka ku hayaa baaqa Siilaanyo ee dib u furida wadahadalkii Federaalka Soomaaliya? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland: Muxuu salka ku hayaa baaqa Siilaanyo ee dib u furida wadahadalkii Federaalka Soomaaliya?
Somaliland: Muxuu salka ku hayaa baaqa Siilaanyo ee dib u furida wadahadalkii Federaalka Soomaaliya?
January 12, 2016 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo oo shalay khudbadiisii sanadka usoo jeediyey labada gole ee dowlada Somaliland ayaa ku baaqay in dib loo furo wadahadalkii u dhaxeeyey Maamulka Soomaaliland iyo Dowlada Federaalka.
Madaxweyne Siilaanyo ayaa si adag uga hadlay in Somaliland uu yahay wadan ka madax banaan Soomaaliya oo ay diyaar u yihiin difaaciisa inay dhiig u daadiyaan ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in dib loo furo wadahadalkii u dhaxeeyey Dowlada Federaalka iyo Somaliland.
Ma ahan markii kowaad ee Somaliland ku dhawaaqdo in dib loo furo wada hadalkii bur-burey, waxaa la dhihi karaa waa markii afaraad tan iyo markii uu bur-burey shirkii Istanbul
Dowlada Somaliland oo dhibaato weyn ka heysato dhanka hirgelinta mashaariicda waaweyn sida dhismaha Waddada isku xirta Berbera iyo Addis Ababa mashruucaasi oo uu ku baxayo in ku dhaw 2 bilyan oo Dollar ayey Somaliland olole ugu jirtaa inay oggolaato Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Sahminta Mashruucan ayaa waxaa horey u sameeyey shirkad laga leeyahay Germany oo lagu magacaabo Gauff, shirkadaasi oo qandaraaska ka heshay IGAD waxaana dhaqaalaha ku baxay daraasadaasi bixiyey EU-da.
Mashruuca loo yaqaan Berbera Corridor ayaa ah mid ay qeyb maalgelineyso Bangiga Adduunka ayaa wuxuu soo socday gorgortankiisa muddo ka badan 10 sano, wuxuuna mashruucan salka ku hayaa in wadooyin balaaran laga dhiso wado isku xirta Berbera illaa iyo Addis Ababa si dowlada Itoobiya u adeegsato Dekkada Berbera.
Dowlada Itoobiya ayaa si gaar ah u daneenaysa dhismaha Wadadaasi iyo balaarinta Dekkada Berbera si ay uga kaaftoonto maciishada ay kala soo degto dekadaha Sudan, Jabuuti iyo Mombasa oo waddooyin dheer ku ah, halka waddada Berbera iyo Addis Ababa ay tahay 930km, dhinaca Somaliland ayaa loo dhisayaa waddada Berbera illaa Wajaale oo ah 240 oo ay ku jiraan buundooyin casri ah iyo balaarinta Dekkada Berbera. Dhanka Itoobiya ayaa la sheegay in la dhisayo wadada Xaduuda illaa Addis Ababa oo ah 690km.
Hirgelinta Mashruucan ayaa waxaa caqabado weyn ka qabsaday Somaliland maadaama heshiiskii ay la gashay Dowlada Itoobiya laga codsaday in laga ansixiyo Dowlada Federaalka Soomaaliya ee la aqoonsan yahay.
Itoobiya ayaa heshiiska ay Somaliland la gashay uu qorayaa in aan Wax Canshuur ah laga qaadi karin Waxa ay kala soo degto Berbera heshiiskaas oo loo yaqaan (Transit Trade), balse dhismaha iyo Ballaarinta wadada Berbera iyo Dekkada ayaa ah mid ahmiyad gaar ah u leh dhaqaalaha iyo ganacsiga Somaliland, taasi oo u fududeenaysa in maalgashi caalami ah lagu sameeyo dhulkaasi.
Wadanka Itoobiya oo shacabkiisa hadda gaarayaan 90 milyan ayaa wada mashaariic waaweyn oo uu sare ugu qaadayo dhaqaalahooda iyo awoodooda ganacsi oo ah midda ugu kobaca badan Afrika, waxayna dooneysaa inay ballaariso Dekadda ay isticmaalayaan iyo kharashka uga baxa canshuurta laga qaado, sababaha ay u dhimayaan adeegsiga Sudan iyo Jabuuti maaha waddada oo dheer eoo kaliya balse waxaa laga qaadaa Canshuur badan, heshiiska Berbera Corridor ayaa hadduu hirgalo u baajinaya Bilaayiin dollar oo uga bixi lahaa canshuurihii looga qaadi jiray dekkada Port Sudan, Jabuuti Port iyo Mombasa port.
Itoobiya ayaa sidoo kale ka faa’iideysaneysa awooda yarida Somaliland oo ah dal aan la aqoonsaneyn isla markaana dooneysa in Dowlada Federaalka aysan waxna ka bedalin heshiiska ay horey ulla saxiixatay Somaliland.
Xukuumada Itoobiya ayaa sheegtay inay iyadu lacagta ka keeni doonto Bangiga Adduunka, balse maadaama Soomaliland aan la ictiraafsaneyn loo baahan yahay Shirkado Caalami ah oo damaanad qaada maamulka dekkada Berbera, arrintaasi oo ay dhexda kasoo gashay Dowlada Imaaraadka oo hadda ku cadaadineysa Federaalka Soomaaliya inuu heshiiska saxiixo si shirkada Dubai Port loogu wareejiyo Dekkada Berbera.
Itoobiya iyo Imaaraatiga ayaa faa’iido ka heli kara ganacsiga Berbera oo yoolkiisa yahay suuqa weyn 90ka milyan ee Itoobiyaanka ah ayaa waxaa halkaasi ku waayaya Canshuur Somaliland iyo Dowlada Soomaaliya labaduba. Balse Somaliland ayaa u aragta in dhismaha dhulkeeda uu shaqo-abuuris u sameenayo shacabkeeda maadaama aysan heysan mashaariic kale oo waaweyn oo dhulkaasi laga hirgeliyey tan iyo burburkii dowladii hore ee Soomaaliya.
Somaliland ayaa rajeenaysa in dhaqaale badan kasoo galaya wadooyinka loo dhisayo ee Berbera illaa bartamaha Hargeysa inta laga gaaro Wajaale.
Waxaa la isweydiinayaa sida ay isku waafiqi karaan gorgortanka Somaliland kula jirto Dowlada Federaalka ee ah inay saxiixdo heshiiska Berbera – Addis Ababa Corridor iyo Madax-banaanida ay Somaliland dooneyso inay ictiraaf uga hesho caalamka, arrimahan oo mushkilad ku noqday xukuumada Siilaanyo oo la xaqiijiyey in si hoose ulla xariirto Dowlada Federaalka, dhanka Warbaahintana u mariso hadalo adag oo lagu qancinayo shacabka Somaliland oo si weyn uga soo horjeeda in maamulkooda wax xiriir ah la yeesho Dowlada Federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Maxay kula tahay adiga in ay salka ku hayso, Midnimadii oo ay doonayaan?, Aqoonsi ay ka dhex raadinayaan? mise arrimo dhaqaale ayaa uga jira?, aan ku maqalno aragtidaada qaybta Hoose ee Comments-ka adiga oo isticmaalaya Facebook.
Wadahadaladii Dowladda Federaalka iyo Somaliland oo burburay!
Wasiirka Warfaafinta Federaalka oo Somaliland ku eedeeyey burburka Wada hadalka
Somaliland oo gacan ku dhiigle ku tilmaantey qaar kamid ah ergadii Dowladda ee wada-hadalkii burburay [VIDEO]
Fashilka wada-hadalka Dowladda Federaalka iyo Somaliland yey guuldarro u tahay?
Somaliland oo dedaal ugu jirta in wada hadalkii DFS dib loo furo [DHEGAYSO]